नेपालसँगै मेलबर्नमा यो वर्षको भेलेन्टाईन डेमा लभ डायरिज प्रदर्शन हुँदै ! « MNTVONLINE.COM
नेपालसँगै मेलबर्नमा यो वर्षको भेलेन्टाईन डेमा लभ डायरिज प्रदर्शन हुँदै !
यो वर्ष १४ फेब्रुअरी शुक्रबार परेको छ । हरेक साता शुक्रबार नेपाली चलचित्र रिलिज हुने क्रममा यस पटक लभ डायरिज रिलिज हुँदैछ । यही चलचित्रलाई नेपालसँगै अष्ट्रेलियामा पनि रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ । यसैक्रममा शुक्रबार १४ फेब्रुअरीको दिन लभ डायरिजलाई मेलबर्नमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको हो । कला ईन्टरटेन्मेन्टले प्रदर्शन गर्न लागेको चलचित्र नामै अनुसार लभ जनराको हो ।
स्थानीय चाईना टाउन सिनेमा हलमा शुक्रबार राति सवा सात बजे प्रदर्शन गरिनेछ ।
सौरभ चौधरी निर्देशित चलचित्र विश्वजित रिमाल, बिष्णु सापकोटा, अर्जुनजंग शाही, बिशाल पहारीलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । चलचित्रमा संजय लामाको छायांकन, मिलन श्रेष्ठ र दिर्घ खड्काको सम्पादन छ भने, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी र अर्जुन पोखरेलले संगीत भरेका छन् ।
भारतीय चर्चित टीभी अभिनेता समीर शर्मा मृत भेटिए !
भारतका लोकप्रिय टीभी अभिनेता समीर शर्मा मुम्बईस्थित घरमा मृत भेटिएका छन् । बुधबार राति उनको
सुशान्त आत्महत्या प्रकण : सुशान्तकी प्रेमिका रिया फरार
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्याका कारणमा सिबिआई जाँच हुने भएको छ । बाबु र
मेक मनी रेकर्डसमा उज्वलको “उपदेश” कस्तो छ ? (भिडियोसहित)
मेलबर्नमा रही संगीत सिर्जनामा तल्लीन उज्वल घिमिरेले आफ्नो नयाँ गीत उपदेश बजारमा ल्याएका छन् ।
प्रकाश सपुतको ‘बदला बरीलै’ युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर एकमा !
चर्चित गायक प्रकाश सपुतको बलात्कृत चेलीको बेदना र विद्रोह झल्काउने लोकगीत ‘बदला बरीलै’ सार्वजनिक भएको